म भर्जिन होइन - कुराकानी - साप्ताहिक
पछिल्लो पुस्ताका गम्भीर अभिनेता हुन्— गौरव पहारी । चलचित्र होस्टलदेखि हालसम्म आइपुग्दा उनले अभिनय गरेका प्राय: सबै चलचित्र सफलसमेत छन् । पहारी आफ्नो पछिल्लो चलचित्र मिस्टर भर्जिनबाट निकै आशावादी छन् ।
यौनका विषयमा तपार्इंको धारणा ?
यो सामान्य कुरा हो, लुकाउनुपर्ने विषय होइन । हाम्रो देश यो विषयमा उदार हुन नसक्दा बलात्कारजन्य घटनाहरू बढिरहेका छन् । यदि सेक्सका विषयमा उदार बन्ने हो भने ती घटनासमेत कम हुन्छन् ।
मिस्टर भर्जिनमा अभिनय गर्नुको कारण ?
नेपालको पहिलो सेक्स कमेडी भएकाले त्यसै पनि यो चलचित्र एउटा इतिहास हो । अर्को कुरा, यो चलचित्रको मुख्य सन्देश सेक्सप्रतिको समाजको दृष्टिकोण फराकिलो हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले पनि म यो चलचित्रमा अभिनय गर्न राजी भएको हुँ । यो चलचित्र एउटा कोशेढुंगा नै सावित हुनेछ, म यसबाट पूर्ण रूपमा आशावादी छु ।
तपाईंका विगतका चलचित्रभन्दा के अर्थमा फरक छ यो चलचित्र ?
धेरै फरक छ । मैले विभिन्न चलचित्रमा फरक–फरक भूमिका निर्वाह गरेको छु । यो चलचित्र त त्यसै पनि फरक छ । विगतका चलचित्रमा भन्दा अझ बढी मेहनत गरेको छु ।
चलचित्रसँग तपाईंको जीवन मेल खान्छ ?
मज्जाले, यो हरेक युवायुवतीको कथा हो । फरक यति हो कि मानिसहरू सेक्सका विषयमा खुलेर कुरा गर्दैनन । यो चलचित्रले त्यही अवस्था देखाउँछ ।
तपाई चाहिँ भर्जिन कि... ?
नो, म भर्जिन होइन । म ढाँट्दिन । मैले सानैमा आफ्नो भर्जिन तोडिसकेको छु । म यो विषयमा पूर्ण जानकार छु । मलाई राम्रो अनुभव छ ।
प्रकाशित :भाद्र ५, २०७५
फस्ट लभ इज फस्ट लभ किन भनिएको होला चैत्र ६, २०७५
सन्नी लियोनले प्रेम प्रस्ताव राखिन् भने चैत्र ५, २०७५
तीन पाने (रक्सी)मा कहाँ–कहाँको पानी मिसिएको हुन्छ चैत्र ५, २०७५
महिला आफैं सक्षम हुनाले राष्ट्रपत्नी नभाको चैत्र ४, २०७५
म रिलेसनसिपमा छु चैत्र १, २०७५
गर्लफ्रेन्डको खोजीमा छु फाल्गुन १६, २०७५